Goormaa ilmaha lagu meelayaa meel kale oo aan gurigiisa ahayn? - Lastensuojelu.info
Markay xaalad adag jirto waxaa la samayn karaa, in ilmaha ama qoyska oo dhan gurigooda laga kaxeeyo oo wakhti gaaban lagu meeleeyo meel kale, taas oo ah waxqabad taageero oo daryeelka furan ah. Meelaynta daryeelka furan ah.
ilmaha wakhti gaaban baa la meelayn karaa, Haddey xaaladdu si dhakhso ah u hagaagayso. Tusaale ahaan, hadday waalidka iyo qofka dhallinyarada ah isku xumaadaan oo xaalkoodu gaaro heer aanay suuragal ahayn inay meel ku wada noolaadaan, markaas qofka dhallinyarada ah waxaa loo soo jeedin karaa, inuu wakhti xoogaa ah ku noolaado meel kale oo aan guriga waalidkiis ahayn. Waalidku iyagaa weli go’aan ka gaaraya ilmaha daryeelkiisa iyo arrimihiisa oo dhan. Dhibaatooyin xagga mukhaadaraadka ama dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda ah dartood waxaa dhici karta in waalidku xitaa leeyahay wakhti muddo ah oo baxnaanin ah, markaas oo kale waxaa dhici karta inuu qoyska oo dhan si ku meelgaar ah ugu guuro meesha waalidka lxiliga baxnaaninta. Haddii loo baahdana wakhtigaas ku meeleynta ku meelgaarka ee waxqabadyada taageerada ee daryeelka furan deg-deg ayaa loo sameyn karaa.
Haddii ilmuhu khatar ku sugan yahay, markaa degdeg ayaa meelaynta loo sameeyaa
Markii xaalad aad u adag timaato ilmaha ama qoyskoo dhan waa lagu meeleyn karaa wakhti gaaban guriga meel ka baxsan ee. waxqabadyada taageerada ee daryeelka furan. Ku meeleynteeduna qasab ma aha. Taas ayaa lagu magacaabaa meeleynta deg-dega ah
Meeleynta deg-dega ah had iyo goor waa mid ku meelgaar ah. Waxayna ku imaan kartaa tusaale, haddii waalidku ay aad u mukhaadaraadaysan yihiin oo aanay awoodin inay ilmahooda daryeelaan, ama haddii ilmaha keligii guriga lagaga tago wakhti dheer. Markaa waxaa suurogal ah in ilmihii nafsadiisa khatar geliyo tusaale inuu isticmaalo mukhaadaraad. Haddii ilmuhu khatar naftiisa ku yahay waa la sameyn karaa meeleynta deg-dega ah, xitaa haddii ilmaha iyo waalidkuba raali ka aheyn.
Shaqaalaha badbaadadda carruurta si baaxadeysan ayey xaq u leeyihiin iney go’aamiyan danaha ilmaha xiliga ku meeleynta meelgaarka ah. Si kastaba waxay wada shaqeyn joogta la yeelanayaan waalidka. Xaalada qoyska iyo caawimada ay u baahan yihiin waxaa la xaqiijinayaa xiliga ku meeleynta deg-dega. Hadafka la leeyahayna waa inuu ilmuhu ku laaban karo gurigiisa oo ay ka jiraan marxalado ammaan leh. Qofka ah shaqaalaha sooshalka ayaa qiimaynaya, in meelayntu dhammaan karto iyo in kale, isaga ayaana gaara go’aanka lagu joojinayo meelaynta. Haddii loo arko, in aanay nabadgelyo ku jirin, inuu ilmuhu gurigiisii ku noqdo, waxaa la bilaabi karaa in la diyaariyo la wareegidda caadiga ah.
La wareegiddu waa waxa ugu dambeeya ee la sameeyo marka xal kale la waayo
La wareegiddu waxaa loola jeedaa, in ilmihii lagu daryeelayo meel aan aheyn gurigiisii. Waana dariiqada ugu denbeysa ee la yeelo, waxaana la sameeyaa hadday dhibaatooyinka jiraa aad iyo aad u waaweyn yihiin ama ay muddo dheer soo jireen. Sida caadiga ah waxyaabo badan baa soo dhacay la wareegidda ka hor, sidoo kale reerka iyo ilmahana leysku dayey in siyaabo kaloo badan lagu caawiyo. Sharciga ayaa amraya, in ilmihii lala wareego, markii wax kaloo caawinaya jirin. Shaqaalaha dowladuna si kastaba waa iney wada shaqeyn la yeeshaan waalidka, shaqaaluhuna ma laha go’aanka caqiidada carruurta.